Agadir, ebe njedebe na Morocco | Akụkọ Njem
Agadir, njedebe na Morocco
Mariela Carril | | Morocco, Ihe ị ga-ahụ
Mgbe ọ gafere, onye ọ bụla ga-anọ ebe ahụ na-eche ndị ọbịa. Kedu maka iji obere njem gaa Morocco? Kedu maka ịgagharị obere na ịga Agadir? Obodo bu 600 kilomita site Rabat na ihe kariri 400 si ewu ewu Casablanca.
Agadir na-bụ obodo gbara osimiri okirikiri, nke dị n’Oké Osimiri Atlantik, jikọtara n’etiti ugwu na ụsọ mmiri, ma jikọta ya na ebe ndị ọzọ na Morocco, ọ bụrụ na ịchọrọ ịgagharị na obodo ahụ wee mara karịa otu ebe.
2 Njem Nlegharị Agadir
Dị ka anyị kwuru, ọ bụ n'ụsọ oké osimiri, n'ime mmiri nke Agadir, n’elu ebe Ugwu Atlas ruru n’oké osimiri. Nwere ike ịga ụgbọ elu ebe ọ nwere ọdụ ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ, ma ọ bụ ụgbọ ala, na-eji okporo ụzọ na-akwụ ụgwọ na-ejikọ ya na Tangier, Marrakech, Casablanca na Rabat.
Agadir dị na ndịda nke morocco ma nwee a ọkụ na akọrọ sub ebe okpomọkụ ihu igwe. Echebe site na oke ikuku nke oke ugwu na anuri onu ikuku, nke bu eziokwu bu Agadir ọ bụ nnukwu ebe Ezigbo, otu n'ime ndị kasị ewu ewu na mba ahụ. Chee na mmiri dị gburugburu 20'C n'oge ọkọchị yana ọbụlagodi n'oge oyi, ihu igwe dị nro.
Banyere akụkọ ntolite ya, Agadir Ndi Portuguese hiwere ya na narị afọ nke XNUMX ma ndị Sadia batara ma bibie ya na narị afọ sochirinụ. Naanị na mmalite nke narị afọ nke XNUMX ka a ga-ewughachi ya ọzọ, mgbe Ọrụ French. Mgbe ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba a gafere n'aka Morocco, na njedebe nke afọ ndị 50. Oldlọ ochie ndị ahụ dabara na a ala ọma jijiji n'afọ 60, ya mere ọdịdị ya nke oge a na-ewere mgbe emezigharị.
Ọdụ ụgbọ mmiri ya bụ ebe a na-akụ azụ̀, ma ala ubi ya na-emepụta ọtụtụ citrus. Nwughari ala-ala ọma jijiji emeela ya otu n'ime obodo kachasị ọhụrụ na Morocco, nwere ụlọ ndị toro ogologo, ụzọ dị obosara, ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ.
Njem Nlegharị Agadir
Ọ bụ ebe njedebe njem mba ofesi nwere ezigbo onyinye nke ụlọ nkwari akụ na ihe omume. Dị ka nke abụọ, otu n'ime ndị isi njem nleta na-adọrọ mmasị na Ogige Ntụrụndụ Souss-Massa, mara mma mara mma. Emepụtara ya na 1991 ma nwe ebe dị warara nke ụsọ oké osimiri Atlantic nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 34 puku hectare. Ọ bụ mpaghara dị ala, na ndagwurugwu na-emighị emi nke na-aga n’oké osimiri.
Ọ bụ ogige nnukwu ihe di iche-iche ebe ndi mmadu biri kwa otutu puku afo. Ihe niile na - arụkọ ọrụ ọnụ iji mee ka ọ bụrụ ebe ama maka ecotourism, karịsịa site na njem nlegharị anya ornithological, otu n'ime ndị kacha mma na Morocco.
Mana ọ bụrụ n’ịchọghị ịhapụ obodo, ma ọ bụrụ na korota, ebe ngosi ihe mgbe ochie na ebe a na-ere nri bụ ihe gị, mgbe ahụ ị ga - anọ n’ime oke Agadir ma ghara ịhapụ ihe ọ ga - enye ebe a. Dịka ọmụmaatụ, enwere ụlọ alakụba, ebe ngosi ihe mgbe ochie, ebe a na-eme ihe nkiri, na ọmarịcha ụlọ.
Nwere ike ịmalite njem nke Nuevo Talborjt, agbata obi ndị colonial, na ya Arab ubi, na Ubi Olhao, na avenida de las Far. Nke a bụkwa Ebe nchekwa ihe ncheta nke gbadoro ukwu na ozi banyere ọdachi ala ọmajiji emere na 1960. Ala ubi ndị ọzọ mara mma ma mara mma bụ Ogige Ibn Zidoum.
na Kasbah mgbidi Ha bụ otu n'ime akụ na ụba ya nke akụkọ ihe mere eme na naanị ihe fọdụrụ n'obodo e wusiri ike nke Agadir. Ebumnuche mbụ ya bụ ichebe obodo ahụ pụọ na mwakpo sitere n'oké osimiri wee laghachi na narị afọ nke XNUMX. Ọtụtụ mmadụ biri na mgbidi mgbidi a. N'ezie, a na-echekwa mgbidi ndị a na ọnụ ụzọ ámá nke ọma, n'otu ugwu dị nro ma soro ya Panoramic echiche obodo mara mma na oke osimiri. Mgbe anyanwụ dara na ese foto kacha mma.
Ke obio bụ Nnukwu ụlọ alakụba, pụrụ iche n'etiti ụlọ alakụba ndị ọzọ, ọgbara ọhụrụ na Ebe a na-eme Amazigh ya na nchịkọta agbụrụ ya, na Ebe ngosi nka Tiskiwin, raara nye Berber art na omenala. Enwekwara Museum of Agadir Memorial, lee Avenida Presidente Kennedy anya, nke anyị kwurula na e wuru na ncheta ala ọma jijiji nke '60, ana m atụ aro ka ị gaa hụ foto nke obodo ahụ dị ka ọ dị tupu ọdachi ahụ.
La agadir beach ọ mara mma ma jee ije n'ụgbọ mmiri na marina ha bụ ezigbo ụzọ iji kelee ya. Boardlọ ndị njem ahụ na-enye ọmarịcha ije dị kilomita ise nke ejiri taịl seramiiki nwee nkwụ. Mmiri bụ nke na-ewu ewu n'oge na-adịbeghị anya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwọ ụgbọ mmiri, ịkwesịrị ịmalite ebe a. Mgbe ahụ enwere ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ n'ụsọ oké osimiri na ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na ụlọ oriri na ọ sunụ andụ na ebe ndị na-agbazite ụlọ ezumike na nche anwụ.
Nwere ike mee njem ụbọchị ma ọ bụ njem si Agadir? N'ezie. Essaouira Ọ dị kilomita 173 n'akụkụ ugwu wee bụrụ obodo mara mma n'ụsọ osimiri nke nwere ụlọ narị afọ XNUMX na mgbidi mgbidi dị iche iche. Ọ bụ akụkụ nke ndepụta nke UNESCO World Heritage ya mere, agaghị m akwụsị ileta ya. E nwere alleys, ụlọ ndị mara mma nkọwa na-acha anụnụ anụnụ ibo, ị nwere ike ịga na ụlọ a pasha, nka ihe ngosi nka…
Imeri kilomita 150 site na Agadir, ruo 166 bụ kpọmkwem Tafroute, obodo ugwu Morocco, Ebe maka ndị hụrụ okike n'anya. Ọ bụ n'ebe ọwụwa anyanwụ nke obodo na-tremendously photogenic na ya Canyon nke Ait Mansour na Annameur prehistoric nka. Obere nso, na njedebe nke Anti-Atlas Mountain Range, 97 kilomita na ndịda, dị Tiznit, ya na nnukwu mgbidi ya site na narị afọ nke XNUMX na ahịa ọla ahịa ya. Ahịa ahụ na Tuesday.
Nso, nso 60 kilomita, nakwa n'ebe ugwu, bụ Valle Paraíso na ndụ ime obodo ya. Ọ bụ ezigbo ebe maka ịgagharị n’etiti osisi almọnd na osisi oliv ma mara obere obodo mgbe ị na-enwe ọmarịcha echiche banyere ugwu na igwe. Ọ na-arụkarị ọrụ na ngwụsị izu, ndị obodo na-erite uru ma gbapụ, yabụ ọ bụrụ na ị ga-aga n’izu ahụ ihe niile ga-adị jụụ.
Na ndagwurugwu Souss bụ obodo Taroudant, ya na nnukwu aja aja terracotta nwere na ahịa ya mara mma ebe ị nwere ike ịzụta ihe niile na ihe niile. Nwere ike ịga ije na rampi brik ndị gbara obodo ahụ gburugburu, hụ ọnụ ụzọ ámá ya na-agbachitere ya, ma jiri ụkwụ mee njem n'okporo ụzọ dị na Kasbah. Kilomita ole ka ọ dị site na Agadir? Taroudant dị naanị kilomita 88.
To na-amasị sọfụ? Mgbe ahụ Taghazout na-echere gị. Bụ a osimiri na-ewu ewu nke ukwuu n'etiti ndị obodo na ndị njem nleta n'oge ọnwa ọkọchị, agbanyeghị na enwere ike ịme sọọfụ n'afọ niile. Surf na-eku ume ebe a, ma ị bụ onye mbido ma ọ bụ ọkachamara. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ agụ iyi, ị ga-aga ebe a na - echekwa ihe ọhụụ nke dị naanị kilomita iri na anọ site na Agadir. Lee ndụ nile agu, ruo mgbe na-adịbeghị anya ụdị juru ebe niile n'agbanyeghị taa dị egwu.
Este Okpokoro na-agba mbọ i emomi ọnọdụ obibi ndụ ha ma na-enye ndị ọbịa nlegharị anya. Dị ka ị hụrụ, Agadir bu ezigbo njem: osimiri, ugwu, obodo nta ugwu, akụkọ ntolite, mgbidi, njem ụgbọ mmiri… Ọ bụrụ na ị gaa, obi abụọ adịghị ya, ọ ga-abụ njem na-adọrọ adọrọ ma na-agaghị echefu echefu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Morocco » Agadir, njedebe na Morocco